Dhismaha Xogta Weyn ee Weyn Isticmaalka Shanta SEM ee Istaraatiijiyadaha ah oo ka soo jeeda Sare
Milkiilayaasha ganacsigu waa inay fahmaan in SEM ama istaraatiijiyadaha SEO aanay ahayn kuwo dabacsan oo aan ku wanaajineynin wacyigalinta maqalka. Sababta ayaa ah in algorithm-ka raadinta markasta isbedelaan. Maadaama ay isbedeladaan dhacayaan, sidaas darteed ganacsigu waa inuu isticmaalaa fursad kasta - hospedagem e dominio gratis por 30 dias el. Waa sida kaliya ee shirkadda ROI ay ku toogan doonto. Waxyaabaha soo socda ayaa ah 5-talaabo oo lagu sharraxay Igor Gamanenko, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamilka, iyada oo gacan ka helaysa midka hagaajin kara adeegyadda deegaanka SEO
1. 54% dadka Mareykanka ah ee wax iibsanaaya ayaa ka baqay isticmaalka buugaagta taleefanka si ay u galaan internetka oo ay u sameeyaan raadinta maxaliga ah ee alaabta ama adeegyada. Sidaa darteed, macnaheedu waa in macaamiisha maxalliga ah ay sameeyaan laf-dhabarka ganacsiga iyo milkiilayaashu waa inay ku dadaalaan sidii ay u qancin lahaayeen danahooda haddii ay tahay inay ku noolaadaan warshadaha. Tusaale ahaan sida Parsons Behlem iyo Latimer shirkadaha Sharciga ee Utah, kuwaas oo soo cusbooneysiiya macaamiishooda ku saabsan warkii ugu dambeeyay ama sharciga maxalliga ah kuwaas oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan iyaga oo isticmaalaya boggooda. Waxay ku tiirsan yihiin SEM si ay u socodsiiyaan taraafikada goobahooda, iyo faa'iidada ay ku leedahay goobta.
2. Xidhiidhada iyo xaashiyooyinka ka imanaya goobaha degaanka waxay ku darsadaan khayraad qiimo leh ololayaasha wacyigalinta ganacsiga. Waxay kor u qaadaan joogitaanka noolaha iyo sidoo kale gaadiidka gudbinta ee SEO-ga maxalliga ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in xiriirada iyo xayeysiinta ay ka mid yihiin calaamadaha ugu sarreeya ee loogu talagalay raadinta Google ee algorithm. Xawilaaduhu waxay u shaqeeyaan sidii codad kalsooni ah oo shirkadda siinaysa xoojin SEO ah oo ka soo baxaysa kalsoonida ay leedahay..
3. Ku sii jir dusha sare ee dadaalkaaga PPC. Waa wax caadi ah in la helo milkiilayaasha ganacsiga oo u maleynaya inay si kalsooni leh u abuuri karaan olole PPC isla markiiba filanayaan natiijooyinka. Google AdWords waa suuqa ugu weyn suuqa xaafadda, iyo mid ka mid ah inuu arko ROI, waa inay noqdaan khabiir beerta. Qabashada olole-ku-riix-riix wuxuu u baahan yahay waayo-aragnimo iyo faham haddii mid ka filayo inuu heysto astaanta si sax ah loo soo bandhigo. Suuq-geynta guryaha dhexdiisa ayaa u muuqata in ay caawiso in la badbaadiyo lacag, laakiin milkiilayaasha ganacsatadu waxay u baahan yihiin inay shaqaaleystaan ​​xirfadle ah inay sameeyaan PPC-da iyaga oo ah ikhtiyaarka ugu fiican mustaqbalka.
4. Sawirrada waa fiican yihiin, laakiin sawirada guuritaanka ayaa ka sii fiican. Waa sahlan tahay in la aqoonsado calaamad iyada oo la isticmaalayo marqaatiyaal ka yimid dadka horey u soo shaqeeyay shirkadda, ama joornaalada ay muujinayaan waxa shirkadu u taagan tahay. Si kastaba ha noqotee, fiidiyowyadu waxay u muuqdaan inay si dhammaystiran u fuliyaan. Xitaa sidaas, mid waa in la xasuusto in lagu daro fiidiyowga fiidiyowga sida nooca qashinka ah, talobixin dhaqaale oo bilaash ah, ama soo jeedin ku saabsan sida loo helo qiime jaban goobta. Haddii kale, fiidiyowga ma saameyn doono saameynta badan sida la filayo. Google wuxuu lacag badan ku maalgeliyay kanaalka YouTube, waana dhacaa inay meel aad u caan ah u tahay shirkadaha raadinaya in ay qayb weyn ka qaadaan suuqa raadinta gudaha.
5. Suuqa Sannadaha Milleniinka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira qiyaastii 86 malyuun oo Millennial ah, taas oo macnaheedu yahay in ay tahay faa'iido faa'iido leh. Haddii calaamaduhu aysan gaarin iyaga oo isticmaalaya moobaylka ay jecel yihiin, markaa waxaa jira fursad weyn oo aaney gaarin kooxda. Marka la gaaro 2018, xayeysiisyada xayeysiinta ah ee xayeysiinta ah ee degaanka ayaa ku jiri doona in ka badan kala badh kharashka guud ee xayeysiiska.
Istaraatiijiyada ugu fiican waxay tahay in lagu tiiriyo Adeegyada SEO-ga iyo shanta talaabo ee lagu xusay xaashidaan waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo hirgelin lahaa, oo loo hagaajin lahaa ROI ee ganacsiga.